Pistachio Jasper - Qaababka Pistachio - Sawirada Pistachio - video
Yasbid, wadar ahaan labada lug ah quartz microgranular iyo / ama khalkedoon iyo marxaladaha kale ee macdanta, waa Doolaal, noocyo kala duwan oo ah Qaarkeed ee silica. Waxay noqon kartaa heer sare safeeyey iyo waxa loo isticmaalaa dheryaha, shaabadihiisa, iyo sanduuqyada buuriga. Miisaanka gaarka ah ee yasbid caadi ahaan waa 2.5 in 2.9. Oo ay la socdaan heliotrope (bloodstone), yasbid (green la baro casaan) waa mid ka mid ah birthstones dhaqameed for March. Jaspilite waa dhagax weyn oo nidar formation bir ah in inta badan uu leeyahay guutooyin kala duwan ee yasbid.
Magacan macnihiisu waa "dhagax barbaraha ama dhibicyo", oo ka qayib via jaspre Old Faransiis (duwanaansho of jaspe Anglo-Norman) iyo Laatiin iaspidem (naanaysta iaspis.)
yasbid Green waxaa loo isticmaali jiray in la sameeyo oo dhoollatus qaansadayda ku dhex Mehrgarh dhexeeya 4th iyo kunkan 5th BC. Jasper la og yahay in ay ku jirtay jawharad uu jecel yahay in dunida qadiimiga ah, ay magaca celin ogan karo in Carabi, Azerbaijan, iiraani, Hebrew, kii reer Ashuur, Greek iyo Laatiin. On Minoan Kereetee, yasbid xardhay in ay soo saaraan shaabadood Ergo 1800 BC, sida laga arday kabsanaya qaddiimiga ah ee daarta Knossos.
Inkastoo yasbid dheer waxa ay hadda ku xaddidan quartz Doolaal, ku iaspis qadiimiga ahaa dhagax lagu translucency badan oo ay ku jiraan nephrite. yasbid ee Qarniyadii hore ahaa in kiisas badan oo si bayaan ah oo cagaar ah, maxaa yeelay, waxay inta badan waa marka loo eego ahaa sumurud, iyo waxyaabaha kale ee cagaaran. Jasper waa in loo gudbiyaa in Nibelungenlied iyo sida ay cad oo dheer oo doog ah. yasbid ee hore ay u badan tahay waxaa ka mid ah dhagax oo hadda loo soo magacaabaa ahaa khalkedoon, iyo yasbid sumurud-sida laga yaabaa in ka dhigan tahay chrysoprase casriga ah. The yushphah erayga Cibraaniga ah ayaa laga yaabaa in loo qoondeeyey yasbid cagaaran. Flinders Petrie soo jeediyay in odem ah, isagu horta dhagax laabta Wadaadka Sare ee, wuxuu ahaa yasbid cas, halka Tarshiish, dhagax tobnaad, ayaa laga yaabaa in yasbid huruud ah.
Rosetta yasbid, ka Africa